Arin naxdinteeda leh oo ay Al-shabaab shalay ka sameyeen Duleedka Baydhabo taasoo ah…….
Waraka ka imaanaya Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ayaa sheegaya in shalay AL-Shabaab Duleedka Magaaladaasi ay ku gubeen gaari jaad waday sidoo kale ku gowraceen milkiilahaa jaadka la qabtay.
Al-Shabaab ayaa jidka u galay gaariga Jaadka waday oo kasoo baxay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay kuna sii jeeday Degmada Buurhakaba , waxaana la sheegay in Al-Shabaab in ay gowraceen nin la sheegay in uu lahaa jaadka la qabtay waxa ay sidoo kale gubeen gaarigii Jaadka waday.
Ehelada Ninka ay Al-Shabaab gowraceen ayaa Warbaahinta u sheegay in ay ka dhacday Duleedka Baydhabo dhacdadan naxtinta badan , waxa ayna wax laga naxo oo canbaareyn mudan ku tilmaameen falkaasi Al-Shabaab geesteen.
Xarakada Al-Shabaab ayaa horey u mamnuucay isticmaalka jaadka iyo waxyaabaha kale ee maanka dooriya , waxa ayna marar badan ay gubeen Al-Shabaab gaadiid jaad u siday Degmooyin iyo deegaano ay kusuganyihiin Ciidanka Dowlada Soomaaliya.(xgs-K24).